Himalaya Dainik » निन्द्रा नलागे अपनाउनु यस्ता घरेलु उपाय
निन्द्रा नलागे अपनाउनु यस्ता घरेलु उपाय
जो मानिस समयमै सुन्त्छन् र गहिरो निन्द्रमा पर्छन्, त्यस्ता मानिसहरुको शारीरीक तथा मानसिक दुवै अवस्था राम्रो हुने चिकित्सकको भनाइ रहेको छ । जो व्यक्तीको निन्द्रा पुग्छ , त्यस्ता व्यक्तीको अनुहारमा समेत चमक आउने चिकि त्सकको भनाई छ । हरेक मानिसको जिवन सोचे जस्तो हुँदैन । चाहेर पनि मस्त निदाउन सक्दैनन् ।
लामो समय सम्म ओछ्यानमा पल्टिदानी निन्द्रा र्पदैन । यसरी लामो समय सम्म निन्द्रा नलागेमा हाम्रो शरीरको किड्नी र मुटुमा सोझै असर गर्छं । तनाव बढ्ने , टाउको दुख्ने डिप्रे सनको सम स्या आउछ । बल्ड प्रेसर बढ्छ । मोटोपन बढ्छ । सुगर बड्छ । जसको लागी हामीले दैनिक ८ घण्टा सुत्नुपर्छ ।
७. बेलुकी सधैं मुख धुने, दाँत माज्ने बानी बसाल्ने , सुत्दा सधैं आफुलाई उपयोगी किताब पढ्ने बानी बसाल्ने ।
९.सुत्ने बेलामा मष्तिस्कलाई कुनै पनि तना व नदिने, सुत्ने बेलामा कहिल्यै मसलेदार खाना खानु हुँदैन । मसलेदार खानाले शरीरलाई हिट दिन्छ र पाचन तन्त्र पनि रात भरी सक्रिय गराइदिन्छ ।
१०.सुत्नु भन्दा १ घण्टा अगाडी दुधमा अलिकती जाइफलको धुलो हालेर खानुहोस् । यसको अलवा दालचिनीको धुलो राखेर दुधमा खादा नि गहिरो निन्द्रा लाग्दछ । २० ग्राम जाइफल प्रयोग गरियो भने यसले ३६ घण्टा सम्म निन्द्रा लाग्छ । पाचन किड्नी लागी राम्रो गर्छ ।
११. सुत्ने बेलामा केरा खाने गर्नुहोस् । केरामा पोटासियम, म्याग्नेसियम, भिटामिन बी ‘६’ पाइने गर्छ ।
१४.हरियो सागसब्जी खान, चिल्लो रहित दही खाने ।
१६.मह खाने यसले मष्ति स्कमा रहेको सेरेटोनिकलाई सन्तुलनमा राख्न मद्धत गर्दछ ।
१७ सुने बेलामा सधै शरीरलाई राम्ररी मालिस गर्नै बानि बसाल्नुहोस् ।
तर सबैलाई ८ घण्टा सुत्नुपर्छ भन्ने छैन ,कोही ५ घण्टा सुतेर नि स्र्फुत हुन सक्छन् । यदि कसैलाई डिपे्र सन छ भने डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको औषध सेवन गर्नुपर्दछ ।